❀ I-Sunny Studio encinci epholileyo kufutshane neBled
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRobert & Renata
Eli fulethi lisanda kulungiswa libonelela ngendawo yokuhlala etofotofo elungele abahambi. Ibekwe kwindawo entle nezolileyo kakhulu yaseRadovljica. Indawo entle ikuvumela ukuba uye ngokulula kwiindawo ezikufutshane (iBled, iBohinj, iLjubljana, ipaki yesizwe yaseTriglav) kunye nezinto ezenziwayo (iRafting, Ukunyuka, ukuqubha, ukuHamba, ukuHamba intaba, ukukhwela ibhayisekile njl.njl..), kwaye kukuhamba okufutshane ukusuka kwindawo endala yeRadovljica ., imizuzu engama-25 ukuya kwikomkhulu lethu iLjubljana.
Esi situdiyo esandula kulungiswa, sikhululekile kwaye sinesitayile esinesitayile.
ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elineoveni kunye nesitovu. Izaliswe zizinto zokupheka ezaneleyo, iipleyiti ezininzi, iikomityi, izitya, ii-cookers, iipani, izitya zeplastiki zokuthatha ukutya. Kukwakho netoaster, micorwave, iketile yeti, icafetiera kunye nomenzi wekofu ohluziweyo. Ikhitshi lizaliswe zizinto eziyimfuneko, njengeoyile, iviniga, iti, ityuwa, ubusi, ikofu, amanzi, njl., ziyafumaneka simahla.
IBHAFA: incinci kakhulu, kodwa inayo yonke into oyifunayo. Kukho ishawari (exhotyiswe ngejeli yeshawa kunye neshampu yokugcina kwipakethe yakho), isinki enesipili kunye nendlu yangasese. Umatshini wokuhlamba kunye nesomisi azikho eflethini kodwa sinokukunika ukukuhlambela iimpahla, ngesicelo kunye nomrhumo we-5eur nganye (ukuhlamba kunye nokomisa).
I-BED: Ibhedi ekhululekileyo yokutsala, enedrowa zokugcina ngaphantsi. Kunikezelwe ngeetawuli kunye nelinen.
INDAWO YOKUPAKA: isimahla kwaye iphambi kwendlu
PETS: wamkelekile kakhulu!
ABANTWANA ABANCINANE: singababeka ebhedini abantwana xa siceliwe
Uya kuba nokufikelela kwi-WiFi yasimahla kunye neNetflix yasimahla ekhoyo kwiTV.
Ikhaya lethu lisisiseko esifanelekileyo somntu omnye okanye isibini esijonge ukonwabela kwaye sijonge iSlovenia, kunye nazo zonke iisayithi kunye nezinto ezinomtsalane elinazo. Ukuba uya kuba nayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, zikhululeke ukubuza.
Siyakuthanda ukuhlala kwesi sixeko simangalisayo kwaye siqinisekile ukuba nawe uya kuba njalo!
Oku kuzolile kakhulu kwaye kuthule, akukho nxalenye yokhenketho od Radovljica. Ukuhamba umgama ukuya kwindawo endala yedolophu. Isikhululo sebhasi yimizuzu emi-5 ngeenyawo (unxibelelwano neBled, Bohinj, Ljubljana), kunye nesikhululo sikaloliwe yimizuzu engama-20 ngeenyawo (unxibelelwano neLjubljana, Jesenice).
Ivenkile ekufutshane yegrosari, indawo yokutyela, ukomelela, ibala lokudlala, indawo yokuqubha kunye nepaki yezemidlalo imalunga nama-600m kude.
Iindlela ezininzi zokuhamba intaba kunye neendlela zebhayisekile ezikufutshane.
ILake Bled likumgama oziikhilomitha ezi-6, kunye nechibi iBohinj malunga nama-20km kude.
E-Radovljica unokonwabela imisebenzi emininzi, efana negalufa encinci, i-rafting, i-canyoning, i-paintball, i-paragliding, i-bowling.
Umbuki zindwendwe ngu- Robert & Renata
Hi! I am Renata, I have husband Robert and two daughters living with me. As a part of renovating our house, we made a small apartment for travellers. We are looking forward to meet…
Iyafumaneka kwiindwendwe zethu 24/7
URobert & Renata yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Radovljica